Suppliers 5Procurements 5229News 40Projects 16
Suppliers 2Procurements 6816News 24Projects 2
Suppliers 4Procurements 4066News 48Projects 11
Oil and condensate processing capacity7.50 mln. tons/year
Nelson Index (NCI)3.60
Suppliers 7Procurements 2567News 30Projects 9
Suppliers 2Procurements 4870News 67Projects 2
Suppliers 4Procurements 4344News 73Projects 8
Suppliers 9Procurements 1088News 292Projects 23
Suppliers 5Procurements 1677News 143Projects 14
Suppliers 3Procurements 3162News 16Projects 6
Suppliers 7Procurements 718News 219Projects 19
Oil and condensate processing capacity8.50 mln. tons/year
Suppliers 3Procurements 3005News 36Projects 4
Suppliers 3Procurements 3065News 34Projects 5
Oil and condensate processing capacity9.50 mln. tons/year
Suppliers 1Procurements 3143News 39Projects 1
Procurements 3881News 47
Suppliers 3News 92Projects 17
Nelson Index (NCI)4.00
Suppliers 5Procurements 1377News 30Projects 7
Oil and condensate processing capacity15.70 mln. tons/year
Nelson Index (NCI)6.90
Suppliers 5Procurements 374News 60Projects 12
Suppliers 1News 60Projects 15
Oil and condensate processing capacity9.00 mln. tons/year
Suppliers 3Procurements 1News 129Projects 14
Suppliers 2Procurements 515News 28Projects 11